Apple dia namoaka endri-javatra vaovao vaovao azo idirana ho an'ny iOS | iPhone News
Apple dia namoaka endri-javatra vaovao vaovao azo idirana ho an'ny iOS
Angel Gonzalez | 20/05/2022 17:00 | iOS, About us
Nanana fanoloran-tena lehibe foana i Apple amin'ny fidirana amin'ny vokatra sy ny rafitra fiasana. Raha ny marina, isan-taona, ny WWDC dia manokan-tena foana hijerena ireo zava-baovao amin'ny fidirana amin'ny rafitra fiasany. Omaly dia nankalazaina ny andro iraisam-pirenena ho an'ny fahatsiarovan-tena ho an'ny fahafahana miditra ary nanokan-tena ho an'ny Apple ny famoahana an-gazety manambara endri-javatra vaovao ao amin'ny rafitra fiasan'izy ireo izay ho tonga amin'ny faran'ny taona. Anisan'ireo fanavaozana ananantsika fikaroham-baravarana ho an'ireo mpampiasa manana fahitana kely kokoa, Apple Watch Mirroring na dikanteny mivantana. Milaza aminao izahay.
Andro iraisam-pirenena ho an'ny fampahalalam-baovao momba ny fidirana sy ny rafitra fiasan'ny Apple
Ny endri-javatra rindrambaiko ho avy amin'ity taona ity dia manolotra fitaovana vaovao ho an'ireo manana fahasembanana ho an'ny fitetezana, fahasalamana, fifandraisana ary maro hafa.
Tamin'ny alàlan'ny famoahana an-gazety midadasika, Apple dia te hanambara ny vaovao rehetra momba ny fidirana amin'ny rafitra fiasan'izy ireo. Ireo endri-javatra vaovao ireo dia hahatratra ny mpampiasa amin'ny faran'ny taona miaraka amin'ireo fanavaozana ho avy izay azontsika ankafizina ao amin'ny WWDC22, ao anatin'izany ny iOS sy iPadOS 16.
Amin'ny ankapobeny, Apple dia nanokana ny ezaka nataony tamin'ny endri-javatra efatra vaovao:
Fikarohana varavarana: Miaraka amin'ny fanatsarana ny lozisialy sy ny fianarana milina, ireo mpampiasa jamba na manana fahitana kely dia ho afaka hamantatra ny varavarana. Ho fanampin’izay dia hisy ny fampahafantarana momba ny varavarana mihitsy, na mihidy na misokatra, na azo sokafana amin’ny fanosehana na amin’ny fanalahidy. Amin'ny lafiny iray, ny fampidirana ny sensor LIDAR amin'ny fitaovana Apple farany dia hanondro hoe firy metatra ny varavarana.
Apple Watch Mirroring: Manomboka amin'ny fampidirana an'io endri-javatra io, ny mpampiasa dia afaka mijery ny efijery Apple Watch amin'ny iPhone ary afaka mifehy izany. Noho ny baikon'ny feo, ny hetsika fanamafisam-peo, ny fanaraha-maso ny loha na ny switch natao manokana ho an'ny iOS. Noho izany dia ho afaka hiaina traikefa mitovy amin'ny mpampiasa sisa izy ireo. Mampiasa ny teknolojia AirPlay izy ireo ary ho afaka hankafy ny tsirairay amin'ireo fiasan'ny famantaranandro maranitra ianao.
dikanteny mivantana: Hampidirina amin'ny rindranasa Mac, iPhone ary iPad ihany koa ny dikanteny amin'ny fotoana tena izy. Ohatra iray amin'izany dia mety ho resaka amin'ny alàlan'ny FaceTime. Ny habeny sy ny endri-tsoratra dia azo ovaina, izay manamora ny fanarahana ny resaka.
Fandrosoana amin'ny VoiceOver: Farany, nitarina ny fiteny misy ny VoiceOver mba hampidirana ny fiteny Katalana, Okrainiana, Vietnamiana, Bengali ary Bolgara. Ny feo vaovao namboarina ho an'ny fiteny tsirairay dia tafiditra ihany koa. Ary amin'ny lafiny iray, amin'ny macOS dia ampiana ny fiasa Text Checker hamerenana ny lahatsoratra nosoratanay, hamantatra ny fahadisoana amin'ny fandrafetana toy ny litera lehibe diso toerana, toerana roa, sns.
Apple nivadika tanteraka amin'ny Andro iraisam-pirenena ho an'ny fampahalalam-baovao mampiseho ireo endri-javatra vaovao rehetra ireo izay ho tonga amin'ny faran'ny taona. Fa ho fanampin'izany, ny fampiharana sy serivisy rehetra dia nanampy votoaty manokana hankalazana ny andro manan-danja toy izany ho an'ny orinasa: avy amin'ny Apple Books ka hatramin'ny Apple TV + amin'ny alàlan'ny Apple Music sy Apple Fitness +.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iOS » Apple dia namoaka endri-javatra vaovao vaovao azo idirana ho an'ny iOS